BAREA LALAON’NY NOSY SY CHAN
Nisy ny fivoriana manokana omaly teo amin'ny tale teknika nasiônaly Debon Jean Francois sy filoha lefitra ny comité de normalisation n’ny baolina kitra Malagasy Andriatiana Harivelo niaraka tamin'reo staff n’ny ekipam-pirenena Barea lalao ny nosy sy Barea Chan, nandaminana sy nizahana vahaolana momba ireo pitsopitsony farany alohan'ny hiatrehana ireo fifaninana iraisam-pirenena goavana.
AZO NORESENA TSARA I TONIZIA
Azo natao tsara ny nandresena ireo Tonizianina tamin'ny ampahefandalan'ny CAN hoy ireo mpitia baolina kitra. Misy fomba fiasa tsy mety ataon'ny mpanazatra izay tsy mba manolo ny mpilalao kanefa efa reraka izy ireo. Zara fa nilalao na nikitika baolina koa ireo tena mpilalao Malagasy fa ireo mpila ravinahitra ihany no nomena sehatra. Mila harenina ireo fomba fiasa ireo raha te-hanatsara ny baolina kitra hoy ny mpankafy. Midika izany fa mbola misy ihany ny tsy afa-po amin’ny fitondran’i Nicolas Dupuis ny ekipam-pirenena, io farany izay efa niangaviana ny mba hanohizany ny asany amin’izay lalao hatao manaraka.
TAKONA NY TARANJA HAFA
Takon'ny Barea tanteraka ny taranjam-panatanjahantena hafa. Misy anefa no mba mahazo medaly volamena ary tompon-daka eran-tany mihitsy, isan’izany ny fibatàna fonjam-by izay nody teto Madagasikara kanea tsy nisy nahafantatra akory ny mpilalao. Kivy amin'ny zavamisy ireo mamiratra amin'ny taranja hafa sy mba nitondra ny voninahim-pirenena satria tsy mba omena fankasitrahaa sy tohanana. Ny lalaon'ny nosy etsy maorisy moa dia tena tsy misy resaka mihitsy kanefa atleta maro no handray anjara amin'izany. Zara raha misy fanampian’ny fanjakana ary raha misy aza dia iviny kely mihoatra amin’ny Barea.
Tsy miova mihitsy ny Jirama. Tsy mba mitady vahaolana entina hialàna amin'ny fahatatapahan-jiro na dia iaraha-mahalala aza fa midangana ny faktiora ary tsy mifandraika amin’ny tokony ho izy. Efa ho iray andro tontolo ny fahatapahana ho an'ireo faritra sasany eto an-drenivohitra omaly. Tsy mba misy ny filazàna mialoha akory fahafaharatsiny fa dia ampiharetana ny mafy hatrany ny vahoaka. Dia voatery hanao fitokonana an-dalambe toa ny fanaon’ny mponin’Itaosy hatrany ve vao voampita ny hafatra fa tena halam-bahoaka ity orinasam-panjakana izay tsy nahomby hatramin’izay ity ?
TE HAHITA BAREA KOA NY ANY AMIN’NY FARITANY
Tsy Antananarivo irery no Madagasikara hoy ireo mponina any amin'ny faritany. Mangataka ny handalovan'ny ekipan'ny Barea any amin'ny faritany ihany koa izy ireo rehefa namoaka fanehoan-kevitra manoloana ny fitsenana ny Barea. Isaky ny renivohi-paritany no mila hanaovana ny fankalazàna makotrokotroka kanefa hita fa efa lasa fitaovana fampielezan-kevitra ho amin'ny dimy taona an-dRajoelina indray ity ekipam-pirenena ity. Mila mandinika tsara ny ekipa ary tsy tokony hanaiky ny hijapian’ny pôltika ny lalao baolina kitra. Ho an’i Toamasina dia efa misy ny hevitra mandeha ny amin’ny tokony hitsenana ilay mpitsabon’ny ekipam-pirenena izay mipetraka any an-toerana, rehefa tsy hita ihany ny mpilalao.
TVM SY MINISTERAN’NY SERSERA
Mifanala-baraka eo amin'ny tambanjotra sosialy sisa no ataon'ny mpiasan'ny TVM sy ny ministeran'ny serasera manoloana ny faharatsian'ny fampitàna mivantana ny fitsenana ny Barea. Vaky ny ady ary manomboka mitroatra ireo mpiasan'ny Tvm izay voalaza fa tsy mahay ny asany kanefa ny mpitantana sy ny fandaminana apetraka no tsy mandeha amin'ny laoniny. Zary lasa henatra ho an'ny firenena ilay fahitalavitra nasionaly fa tsy afaka ireharehana intsony. Miditra loatra amin’ny raharaha anatin’ny Tvm ireo mpitantana ambony eo anivon’ny ministera mpiahy izay mpitsara ny ankamaroany. Tsy misy hain’izy ireo anefa ny kipitsopitsony amin’ny atao hoe fahitalavitra sy asa fanaovan-gazety.
Nahasosotra ary nankarary sofina olona maro ny fomba fiteny sy fanentanana nataon’ireo sokajiana fa andrarezin’ny fampihomehezana eto Madagasikara nandritra ny fandraisana ny Barea manoloan any kianja ben’i Mahamasina ny sabotsy alina teo.Toa efa mifanakaiky amin’ny teny maloto sy tenin-jiolahim-boto, ary tsy mendrika ny hetsika goavana tahaka ireny, hoy ireo nitaraina.
Raha tsy nisy an’i Nathan Mahaiavy dia tena tsy tontosa tanteraka ny fampitàna mivantana izay nataon’ny Tvm, avy amin’ny fampiasany ny vidéo tamin’ny facebook izay ampiasainy. Toa izy indray anefa ankehitriny no hianjeran’ny rihitra rehetra. Misy ny olona izay tsy faly aminy satria tsy mahafehy teny frantsay tsara izy. Misy koa ny azo heverina fa mialona ny asa izay nataony ary miezaka manaratsy azy eny anivon’ny fitondram-panjakàna. Raha araka ny re aza dia efa hatao avokoa ankehitriny izay hanalàna ity mpanao gazety izay matihanina amin’ny fanatanjahan-tena, indrindra ny baolina kitra ity, amin’ny asany eo anivon’ny Tvm. Fa hoentina aiza ity izy ?
TSY HAY NY MIFEHY NY VAHOAKA
Ekena fa tsy nisy ny namoy ny ainy tamin’ity indray mitoraka ity. Na izany aza anefa dia mbola azo heverina fa tsy haintsika mihitsy ny mifehy vahoaka raha eo amin’ny sehatry ny fitandroana filaminana. Na ireo mpilalaon’ny Barea aza dia nitaraina ho reraka ihany rehefa tsy afaka nivoaka tao anatin’ny kamiao nitondràna azy ireo nandritry ny adiny valo. Sady faly no sahirana satria na ny nivalan-drano aza tsy vita raha tsy natao tao anaty tavoahangy plastika ho an’ny sasany. Efa niasa daholo indray ny mpamonjy aina eny anivon’ny hopitaly tsirairay avy sao sanatria hisy ny voina hitranga, toa ny mahazatra rehefa misy ny famoriam-bahoaka.
Miha voaporofo hatrany izao fa tsy voafehin’ity fitondrana ity ny resaka fandaminana kanefa maika ery hanao fety sy miantso vahoaka.Na eo aza ny fihetsem-po sy ny hafaliana, tsy maintsy misy ny drafitra maty paika amin’ny fandaminana sy fifehezana ny fotoana fa tsy atao tahaka ny kilalaon-jaza ny raharaham-pirenena
SIRAMA NOSY BE
Ho tanterahana ato ho ato ny fanadihadiana lalina momba ny tanin’ny Sirama Nosy be.Atao fanadihadiana tahaka aizany ihany koa any fifanarahana rehetra nataon’ity orinasa ity tamin’ireo mpiara-miasa aminy; izany no natao dia mba hahafahana manatsara sy mandrindra ny fitantanana azy.